Mpanamboatra masinina manao masom-baravara 2D - Mpanamboatra masinina manao masinina China 2D
Ity milina ity dia ampiasaina hanamafisana ny tadin'ny sofina amin'ny saron-tava mivalona. Azo atao ny mahatratra ny takiana amin'ny mason'ny PM2.5. Izy io dia manana automatisation avo lenta sy miorina amin'ny avo output ary mampihena ny vidiny amin'ny famenoana vokatra indray mandeha.
Ity milina ity dia ampiasaina hanamboarana banga ho saron-tava. Azo atao ny mahatratra ny takiana amin'ny mason'ny PM2.5. Izy io dia manana automatisation avo lenta sy miorina amin'ny avo output ary mampihena ny vidiny amin'ny famenoana vokatra indray mandeha.